ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေများ ပေးအပ်
တောင်ကြီး မေ- ၃
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရှမ်း ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ထောက်ပံ့ကြေးငွေများ ပေးအပ်ပွဲကို မေ ၃ ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပ ကြောင်းသိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အားတစ်ခုတည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် မရနိုင်သလို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအပါအဝင် ယနေ့တက်ရောက်လာသော လူမှုဝန်ထမ်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းသမားများအပြင် ပြည်သူတရပ်လုံးကပါ လူမှုဝန်ထမ်းအသိစိတ်ဓာတ် မြင့်မြင့်မားမားနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းမှာကြားလိုကြောင်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် (၃၂၄၁.၇၂)သိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၅၄၅၈.၆ သိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်မည်ဖြစ်၍ ယခင်နှစ်ကထက် ကျပ်သိန်းပေါင်း (၂၂၁၆.၈၈)ခန့် ပိုမိုတိုးမြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသွား သည်။
ဆက်လက်၍လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုဝန်မှုဝထမ်းဦးစီး ဌာန၏(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစုစုပေါင်း(၅၄၅၈.၆)သိန်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ထံ ရှမ်းပြည်နယ်လူမှုဝန်းထမ်းရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းဦးကပေးအပ်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ လက်ခံရယူ ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ရာ တောင်ကြီးမြို့ ဓမ္မဝိဒူလူငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ငွေ၃၇၆.၁၇သိန်း၊ ငြိမ်းချမ်းလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၁၁၄.၅၁သိန်း၊ အေးသာယာလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ငွေ၂၈၅.၀၃သိန်း၊ ဒေါ်ကြီးဒေါ်ငယ် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၅၈.၆၁သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်ဖွင့် လှစ်ထား သော မူကြိုကျောင်းပေါင်း(၄၄)ကျောင်းအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ(၂၆၄)သိန်းနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ ကြေး(၄၄)သိန်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်သူငယ်တော်ယေဇူးမသန်စွမ်းနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ ငွေ ၂၅၀.၅၆သိန်း၊ အမျိုးသမီးပရဟိတဂေဟာသို့ ၆၄.၀၅ သိန်း၊ ဟမ်းဆီးလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၃၃.၆၂သိန်း၊ ရှမ်းရိုးမဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ၃၁.၀၂သိန်း၊ Open Doorလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၅.၉၂သိန်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်း(၄၁)ကျောင်းသို့ ၂၄၆သိန်း၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအတွက် ၃၅ သိန်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်လအိလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၃၇.၁၈၅သိန်း၊ လပင်နွဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၀၅.၆၉သိန်း၊ စလင်းပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၁၉.၅၄သိန်းနှင့် ဆိုင်ခွန် တောင် ပရဟိတဂေဟာသို့ ၉၀.၉၉သိန်း၊ နတ်တောပရဟိတဂေဟာသို့၁၂၁.၀၅ သိန်း၊ ဘီကင်းသို့ ၈၈.၀၅သိန်း၊ လကျီ နွဲ့သို့ ၁၀၀.၄၇သိန်း၊ ဇီးဖြူတောင်ပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၁.၆သိန်း၊ သံတာထရေဇာသို့ ၅၀.၇၆သိန်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် စိတ္တသုခပရဟိတဂေဟာသို့ ၇၆.၆၈သိန်း၊ မိုင်းသောက်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၂၅.၄၆သိန်းနှင့် ဇေယျသုခသို့ ၁၅၉.၂၇သိန်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်နန်းဟူးပရဟိတဂေဟာသို့ ၇၅.၄၈သိန်းနှင့် ထီနားကောင်းလူငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၅၆.၅၂သိန်း၊ ကလောမြို့နယ်ပစ္ဆိရုံ(အောင်ပန်း)ပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၄၆.၀၄သိန်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ် သုခကာရီဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ၈.၁သိန်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် ဓနုမြေဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ၁၄.၀၄ သိန်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်း (၁၀)ကျောင်းထောက်ပံ့ငွေ ၆၀ သိန်းနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၁၀ သိန်း၊ လင်းခေးခရိုင်အတွင်းရှိ မကျိုင်းမွန်းလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတ ဂေဟာသို့ ၁၈၀.၆၆ သိန်း၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၄)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၂၄ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၄ သိန်း၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၄၂၇.၂၆ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၂၈)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၁၆၈ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၂၃ သိန်း၊ လားရှိုးခရိုင်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၃၇၆.၁၁ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၁၃)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၇၈ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၈ သိန်း၊ ကျောက်မဲခရိုင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၁၀၆.၀၈ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၄)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၂၄ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၄ သိန်း၊ မူဆယ်ခရိုင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၂၂၆.၀၈ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၂)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၁၂ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်း ထောက်ပံ့ ကြေး ၂ သိန်းတို့အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဇနီး ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတို့ က အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းနောက် တက်ရောက်လာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စား တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းရိုးမ ရိပ်သာကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဝင် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဌေးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ (၃၉၂၀.၀၇)သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)သို့ ထောက်ပံ့ငွေ (၉၀၆.၂၇)သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်)သို့ ထောက်ပံ့ငွေ (၆၃၂.၂၆) သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၅၄၅၈. ၆သိန်း)ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိစတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားအား၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘဏ်ဍာရေးနှဈထောကျပံ့ကွေးငှမြေား ပေးအပျ
လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျ လညျနရောခထြားရေးဝနျကွီးဌာနရှမျး ပွညျနယျအတှငျးရှိ စတေနာ့ ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘဏ်ဍာရေးနှဈ ထောကျပံ့ကွေးငှမြေား ပေးအပျပှဲကို မေ ၃ ရကျ နံနကျ ၉နာရီခှဲက တောငျကွီးမွို့ မွို့တျောခနျးမ၌ကငျြးပ ကွောငျးသိရသညျ။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာလငျးထှဋျက လူမှုဝနျထမျးလုပျငနျးမြားသညျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ နိုငျငံတျောအစိုးရ၏ အားတဈခုတညျးဖွငျ့ ဆောငျရှကျရနျ မရနိုငျသလို သကျဆိုငျရာတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရအပါအဝငျ ယနတေ့ကျရောကျလာသော လူမှုဝနျထမျး၊ စတေနာ့ဝနျထမျးသမားမြားအပွငျ ပွညျသူတရပျလုံးကပါ လူမှုဝနျထမျးအသိစိတျဓာတျ မွငျ့မွငျ့မားမားနှငျ့ အတူတကှပူးပေါငျးပါဝငျကွရနျ တိုကျတှနျးမှာကွားလိုကွောငျး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ်ဍာရေးနှဈတှငျ (၃၂၄၁.၇၂)သိနျး ထောကျပံ့ပေးအပျနိုငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ်ဍာရေးနှဈတှငျ ၅၄၅၈.၆ သိနျး ထောကျပံ့ပေးအပျမညျဖွဈ၍ ယခငျနှဈကထကျ ကပျြသိနျးပေါငျး (၂၂၁၆.၈၈)ခနျ့ ပိုမိုတိုးမွငျ့ထောကျပံ့ပေးနိုငျမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့အနဖွေငျ့ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျပွီး လူမှုဝနျထမျးဌာနကို အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ပွောကွားသှား သညျ။
ဆကျလကျ၍လူမှုဝနျထမျးကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျလညျနရောခထြားရေးဝနျကွီးဌာန လူမှုဝနျမှုဝထမျးဦးစီး ဌာန၏(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ်ဍာရေးနှဈ ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှေ ခှငျ့ပွုရနျပုံငှစေုစုပေါငျး(၅၄၅၈.၆)သိနျးကို ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာလငျးထှဋျထံ ရှမျးပွညျနယျလူမှုဝနျးထမျးရုံး ညှနျကွားရေးမှူး ဦးထှနျးဦးကပေးအပျရာ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျမှ လကျခံရယူ ကွောငျး သိရသညျ။
ထို့နောကျ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှမြေား ပေးအပျရာ တောငျကွီးမွို့ ဓမ်မဝိဒူလူငယျ ဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ထောကျပံ့ငှေ၃၇၆.၁၇သိနျး၊ ငွိမျးခမျြးလူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ထောကျပံ့ငှေ ၁၁၄.၅၁သိနျး၊ အေးသာယာလူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ထောကျပံ့ငှေ၂၈၅.၀၃သိနျး၊ ဒျေါကွီးဒျေါငယျ လူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ၁၅၈.၆၁သိနျး၊ ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ တပျရငျးတပျဖှဲ့မြားတှငျဖှငျ့ လှဈထား သော မူကွိုကြောငျးပေါငျး(၄၄)ကြောငျးအတှကျ ထောကျပံ့ငှေ(၂၆၄)သိနျးနှငျ့ သငျထောကျကူပစ်စညျးထောကျပံ့ ကွေး(၄၄)သိနျး၊ တောငျကွီးမွို့နယျသူငယျတျောယဇေူးမသနျစှမျးနှငျ့လူငယျဖှံ့ဖွိုးရေး ပရဟိတဂဟောသို့ ထောကျပံ့ ငှေ ၂၅၀.၅၆သိနျး၊ အမြိုးသမီးပရဟိတဂဟောသို့ ၆၄.၀၅ သိနျး၊ ဟမျးဆီးလူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ၁၃၃.၆၂သိနျး၊ ရှမျးရိုးမဘိုးဘှားရိပျသာသို့ ၃၁.၀၂သိနျး၊ Open Doorလူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ၂၅.၉၂သိနျး၊ တောငျကွီးခရိုငျအတှငျးရှိ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးမူလတနျးကွိုကြောငျး(၄၁)ကြောငျးသို့ ၂၄၆သိနျး၊ သငျထောကျကူ ပစ်စညျးဝယျယူရေးအတှကျ ၃၅ သိနျး၊ ဖယျခုံမွို့နယျလအိလူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ၂၃၇.၁၈၅သိနျး၊ လပငျနှဲ့လူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ၁၀၅.၆၉သိနျး၊ စလငျးပရဟိတဂဟောသို့ ၂၁၉.၅၄သိနျးနှငျ့ ဆိုငျခှနျ တောငျ ပရဟိတဂဟောသို့ ၉၀.၉၉သိနျး၊ နတျတောပရဟိတဂဟောသို့၁၂၁.၀၅ သိနျး၊ ဘီကငျးသို့ ၈၈.၀၅သိနျး၊ လကြီ နှဲ့သို့ ၁၀၀.၄၇သိနျး၊ ဇီးဖွူတောငျပရဟိတဂဟောသို့ ၂၁.၆သိနျး၊ သံတာထရဇောသို့ ၅၀.၇၆သိနျး၊ ညောငျရှမွေို့နယျ စိတ်တသုခပရဟိတဂဟောသို့ ၇၆.၆၈သိနျး၊ မိုငျးသောကျလူငယျဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ၁၂၅.၄၆သိနျးနှငျ့ ဇယေသြုခသို့ ၁၅၉.၂၇သိနျး၊ ပငျလောငျးမွို့နယျနနျးဟူးပရဟိတဂဟောသို့ ၇၅.၄၈သိနျးနှငျ့ ထီနားကောငျးလူငယျ ဖှံ့ဖွိုးရေးပရဟိတဂဟောသို့ ၅၆.၅၂သိနျး၊ ကလောမွို့နယျပစ်ဆိရုံ(အောငျပနျး)ပရဟိတဂဟောသို့ ၁၄၆.၀၄သိနျးနှငျ့ ရပျစောကျမွို့နယျ သုခကာရီဘိုးဘှားရိပျသာသို့ ၈.၁သိနျး၊ ပငျးတယမွို့နယျ ဓနုမွဘေိုးဘှားရိပျသာသို့ ၁၄.၀၄ သိနျး၊ လှိုငျလငျခရိုငျအတှငျးရှိ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးမူလတနျးကွိုကြောငျး (၁၀)ကြောငျးထောကျပံ့ငှေ ၆၀ သိနျးနှငျ့ သငျထောကျကူပစ်စညျးထောကျပံ့ကွေး ၁၀ သိနျး၊ လငျးခေးခရိုငျအတှငျးရှိ မကြိုငျးမှနျးလူငယျဖှံ့ဖွိုးရေး ပရဟိတ ဂဟောသို့ ၁၈၀.၆၆ သိနျး၊ ကိုယျ့အားကိုယျကိုး မူလတနျးကွိုကြောငျး (၄)ကြောငျး ထောကျပံ့ငှေ ၂၄ သိနျး၊ သငျထောကျကူပစ်စညျးထောကျပံ့ကွေး ၄ သိနျး၊ ကြိုငျးတုံခရိုငျအတှငျးရှိ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှေ ၄၂၇.၂၆ သိနျးနှငျ့ ကိုယျ့အားကိုယျကိုး မူလတနျးကွိုကြောငျး (၂၈)ကြောငျး ထောကျပံ့ငှေ ၁၆၈ သိနျး၊ သငျထောကျကူပစ်စညျးထောကျပံ့ကွေး ၂၃ သိနျး၊ လားရှိုးခရိုငျအတှငျးရှိ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှေ ၃၇၆.၁၁ သိနျးနှငျ့ ကိုယျ့အားကိုယျကိုး မူလတနျးကွိုကြောငျး (၁၃)ကြောငျး ထောကျပံ့ငှေ ၇၈ သိနျး၊ သငျထောကျကူပစ်စညျးထောကျပံ့ကွေး ၈ သိနျး၊ ကြောကျမဲခရိုငျ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှေ ၁၀၆.၀၈ သိနျးနှငျ့ ကိုယျ့အားကိုယျကိုး မူလတနျးကွိုကြောငျး (၄)ကြောငျး ထောကျပံ့ငှေ ၂၄ သိနျး၊ သငျထောကျကူ ပစ်စညျးထောကျပံ့ကွေး ၄ သိနျး၊ မူဆယျခရိုငျ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှေ ၂၂၆.၀၈ သိနျးနှငျ့ ကိုယျ့အားကိုယျကိုး မူလတနျးကွိုကြောငျး (၂)ကြောငျး ထောကျပံ့ငှေ ၁၂ သိနျး၊ သငျထောကျကူပစ်စညျး ထောကျပံ့ ကွေး ၂ သိနျးတို့အား ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ၏ ဇနီး ဒျေါနနျးရှမွေငျ့၊ ပွညျနယျဝနျကွီးမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့ က အသီးသီးပေးအပျခဲ့ကွသညျ။
၎င်းငျးနောကျ တကျရောကျလာသော စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြား ကိုယျစား တောငျကွီးမွို့ ရှမျးရိုးမ ရိပျသာကွီးကွပျရေးကျောမတီဝငျ ဒုတိယဥက်ကဌ ဦးစိုငျးမွငျ့ဌေးက ကြေးဇူးတငျစကား ပွနျလညျပွောကွားပွီး ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)အတှငျးရှိ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှေ (၃၉၂၀.၀၇)သိနျး၊ ရှမျးပွညျနယျ (မွောကျပိုငျး)သို့ ထောကျပံ့ငှေ (၉၀၆.၂၇)သိနျး၊ ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျ)သို့ ထောကျပံ့ငှေ (၆၃၂.၂၆) သိနျး၊ ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ထောကျပံ့ငှခှေငျ့ပွုရနျပုံငှစေုစုပေါငျးမှာ ကပျြ (၅၄၅၈. ၆သိနျး)ဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။